आईपीएल कपाल हटाउने बनाम लेजर कपाल हटाउने - उद्योग समाचार - शेन्जेन नो स्मार्ट स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
आईपीएल कपाल हटाउने बनाम लेजर कपाल हटाउन
समय: 2019-12-06 हिट्स: 3
आजकल तपाइँ प्रकाश र कपाल हटाउन को लागी उपकरण र सैलुन सेवा को एक विस्तृत श्रृंखला पाउनुहुनेछ। सबै विधिहरूले तपाइँको छालालाई सहज र कपाल मुक्त छोड्ने छन्, तैपनि कसरी तपाइँ लेजर र आईपीएल (तीव्र स्पन्दित प्रकाश) कपाल हटाउने विधि बीच निर्णय गर्नुहुन्छ? के यो सँधै एक सलुनमा जान आवश्यक छ वा घरमा यो आफैंले गर्न सक्दो प्रभावकारी हुनुभएको छ?
लेजर र आईपीएल कपाल हटाउन बीचको भिन्नता
लेजर र आईपीएल बीचको प्रमुख भिन्नता प्रकाशको प्रकार हो। आईपीएल (तीव्र पल्स लाइट) एक ब्रॉडब्यान्ड पल्सेड लाइट स्रोत हो, जबकि लेजर एक रंगीन सुसंगत प्रकाश स्रोत हो। दुबै विधिहरूले कपालको कपालमा मेलानिनलाई लक्षित गर्दछ र दुबैबाट स्थायी परिणामहरू अपेक्षित गर्न सकिन्छ। प्रोफेशनल लेजर उपचार अधिक छनौट काम गर्दैछ र त्यसैले धेरै उच्च उर्जा कपाल वरिपरि छालाको सट्टा भन्दा कपाल follicle मा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। त्यसकारण प्रोफेशनल लेजरले छिटो परिणामको साथसाथै गाढा छाला टोनमा उपयुक्त हुन्छ। ऊर्जा, फ्रिक्वेन्सी र कपालको र all्ग सबै उपचारको प्रभावकारितामा निर्धारण कारक हुन्, जबकि प्रकाश स्रोत, यो एक लेजर हो वा गहन पल्स फ्ल्यास प्रकाशले सानो भूमिका खेल्दछ।
दुबै आईपीएल लाइट र लेजर आवेग मेलानिन मार्फत कपालको जरामा पुग्छन्। यस उत्तेजनाको जरामा 'हानिकारक' प्रभाव हुन्छ र केही उपचार सत्रहरू पछि, नयाँ जौं उत्पादन गर्न जरालाई रोक्दछ। गाढा कपाल र निष्पक्ष छाला सबैभन्दा उत्तम परिणामहरू पाउन उत्तम संयोजन हो।
के कपाल हटाउने सलुनहरू यसको लायक छन्?
तपाई कुन चाहानुहुन्छ, घरमा वा सलुनमा कपाल हटाउने? यसलाई आफैं घरमा गर्नाले समयको बचत हुन्छ, तैपनि सुरु गर्न तपाईंले यसलाई नियमित रूपमा गर्नुपर्नेछ। एक सलुनमा कपाल हटाउने उपचार पनी एक पेशेवरबाट कसरी जान्नु आवश्यक हुन्छ र छिटो परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ। दुबै केसमा, परिणाम उस्तै हुनेछन् - शरीरको कपालमा पर्याप्त कटौती।
एक बुद्धिमान छाला टोन सेन्सरको साथ मात्र आईपीएल
महान स्मार्ट को M2 उत्पादन एक उच्च तकनीक उत्पादन हो। यसले प्रकाशको प्रत्येक फ्ल्यासको अघि छाला परीक्षण गर्दछ। यदि छालाको र suitable उपयुक्त छैन, वा छालामा कालो दाग वा मोलहरू छन् भने, उत्पादको सुरक्षाको लागि उपकरण प्रकाश हुँदैन।
पछिल्लो उद्धरणको लागि कृपया ग्राहक सेवालाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
अघिल्लो: के लेजर कपाल हटाउने स्थायी हो?
अर्को: घरमा लेजर कपाल हटाउने - तातो वा छैन!